तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका कपटी खेल - नेपालबहस
तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका कपटी खेल
| १५:०३:४२ मा प्रकाशित
३ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आजबाट आफ्नो दोस्रो कार्यकालको तीन वर्ष पूरा गरे । यस अवधिमा उनले गरेका कामको निष्पक्ष समीक्षा गर्दा केही आशा जगाए तर व्यवहारमा भने सबै निराशा मात्रै हात लागेको छ । आज ओलीले आफ्नो कार्यकाल स्वर्णयुग भएको दावीका साथ धेरै पुलिन्दाहरु प्रस्तुत गरेका छन् । साथै, उनले गर्न नसकेको दोष चाहिं आफ्नै पार्टीका विरोधी नेताहरुको थाप्लोमा हालेका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले असहयोग गरेकाले आफूले चाहे अनुसार काम गर्न नपाएको उनको आरोप छ । साथै उनले उनीहरुकै असयोगका कारण आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । कसैले विरोध नगरेको भए धेरै काम भइसक्ने उनको दाबी छ । तर व्यवहारमा भने ओलीले सधैं मनोगत र आत्मकेन्द्रित भएरै सबै काम गरेको देखिन्छ ।
ओलीको यस अवधिमा राम्रा काम औंलामा गन्न सकिएला तर नराम्रा काम भने जति भन्दापनि सकिनेवाला छैन । आफ्नो सत्ता जोगाउने एकमात्र उद्येश्य र चाहनाबाट ग्रस्त ओलीतन्त्रले देश र जनताका लागि खासै केही दिएन । खासगरी विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्ड र विरोधीलाई तह लगाउन कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गर्न गरिएका प्रयत्न अत्यासलाग्दा रहे ।
आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न उनलाई कतैबाट पनि अवरोध नहोस् भन्ने उनको चाहना पूरा गर्न जस्तो सुकै अपराध गर्न उनी चुकेनन् । ओलीको अपराध कर्मलाई बल पु¥याउने काम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको छ । कार्यकारी प्रमुखले गल्ती गर्दा सुधार गर्ने ठाउँमा रहेकी राष्ट्रपति नै दूधको साक्षी बिरालो जस्तो बन्न पुग्दा धेरै समस्या थपिएका हुन् ।
तर ओली भने त्यो मान्न तयार छैनन् । उनले आजै पनि एउटा कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै भनेका छन्– पार्टी भित्रबाटै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध छापामार शैलीमा पदच्यूत गर्ने दुस्साहस गरियो । प्रचण्ड र माधव मिलेर समानान्तर सत्ता चलाउने प्रयत्न भयो । त्यसैले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुपरेको हो ।
उनको यो तर्कले औचित्यपूर्ण काम भएको मान्ने आधार देखिंदैन । पार्टी भित्रको असन्तुष्टि र विरोध व्यवस्थापन गर्न उनी चुकेकै हुन् । घर मिलाउन नसक्दा घरमै आगो लगाएको जस्तो व्यवहार ओलीले देखाए । उनीहरुको घर झगडाको शिकार प्रतिनिधिसभा बन्ने कुराको कुनै तुक छैन । त्यो पनि संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु कुनै पनि अर्थमा औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्न ।
प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न आफूले धेरै नै प्रयास गरेको तर समानान्तर सत्ता नै सञ्चालन गर्न थालिएकाले बाध्य भएर मात्रै विघटन गरेको उनको तर्क छ । जबकी उनले कुन अधिकार प्रयोग गरेर त्यस्तो कदम चाले भन्ने चाहिं खुलाउन सकेका छैनन् । आफ्नो असंवैधानिक कदमको ढाकछोप गर्न जति नै प्रयत्न गरेपनि ओलीले गरेको विघटन संविधानसम्मत भएको मान्नेको संख्या औंलामा गन्ने मात्रै छ ।
त्यो पनि प्रतिगमनका पक्षधर देखिने कानून व्यावसायी मात्रै । विघटनबारे सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन छ । त्यहाँ बहस गर्ने अधिकांश कानून व्यवसायीले ओलीको कदम ठीक भन्न सकेका छैनन् । त्यसैले ओलीले आफ्नाे कदमको जस्टिफाई गर्न जति नै प्रयास गरेपनि त्यसको पुष्टि गर्ने आधार भने तयार गर्न सकेका छैनन् ।
यसरी हेर्दा ओलीको कार्यकाल आर्थिक सामाजिक र कानूनी दृष्टिले समेत त्रुटिपूर्ण छ । जनतालाई हावादारी गफ गरेर बेवकूफ बनाउने उनको हरेक दाउ अहिले आएर उत्तानो परेको छ । ओलीको कार्यशैली र व्यवहारले मुलुक फेरि अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गरेको छ, त्यसलाई समयमै रोकिएन भने कस्तो दुघर्टना हुने हो भन्न सकिन्न ।
पेरिसडाडाँमा प्रचण्ड–माधव समूहकाे स्थायी कमिटी बैठक जारी १ घण्टा पहिले
नेकपा एकता अभियानमा गैँडाकोटमा कमिटी गठन ३ घण्टा पहिले
प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिन्छन सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा थ्रेट कसरी हुन्छ ? ३ घण्टा पहिले
सिभिल अस्पताल पुगेर प्रचण्डले लगाए कोरोना खोप ३ घण्टा पहिले
दाहाल-नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दै ६ घण्टा पहिले
अबको प्रधानमन्त्री ओली नै हुने बस्नेतको जिकिर १७ घण्टा पहिले
वैदेशिक रोजगारी छाडेर च्याउ खेतीमा युवा ३ मिनेट पहिले
म्यान्मारका विदेशमन्त्री आसिएनका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी ४ मिनेट पहिले
अफगानिस्तानमा पत्रकार, अधिकारकर्मी र राजनीतिक व्यक्ति आक्रमणको निशानामा ६ मिनेट पहिले
अमेरिकी सेना रहेको इराकी अखडामा १० वटा रकेट प्रहार ८ मिनेट पहिले
ब्राजिलमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना बाट एक हजारको मृत्यु ९ मिनेट पहिले
खेर गएको जमीनबाट करोडौं आम्दानी हुदै १४ मिनेट पहिले
चलचित्र गोर्खा वारियर २ को निर्माण घोषणा, २७ फागुनबाट छायाँकन १६ मिनेट पहिले
नेपाल टेलिकमले शेयरधनीलाई ४० प्रतिशत नगद लाभांश दिने १७ मिनेट पहिले
दक्षिण सुडानमा विमान दुर्घटना हुँदा १० को मृत्यु २० मिनेट पहिले
कपिलको शब्द संगीतमा तिमीलाई नै सार्वजनिक २१ मिनेट पहिले
झ-झल्को त्यो गाउको सार्वजनिक २६ मिनेट पहिले
भूगोल साहित्य समाजको नयाँ कार्यसमिति २७ मिनेट पहिले
दोभान आगलागीपीडितलाई अपुग सहयोग केन्द्र र प्रदेशसँग मागिने ४९ मिनेट पहिले
बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ ५१ मिनेट पहिले
दोभान आगलागीबाट ७९ घरपरिवार विस्थापित २२ घण्टा पहिले
विराटनगरमा अब अनलाइनबाट कर तिर्न सकिने ४ घण्टा पहिले
कोरोना कहरमा कृषि व्यवसायी बनेका अधिकारी २१ घण्टा पहिले
सरकारले थाल्याे थप ५० लाख डोज खोप खरिदको प्रक्रिया २० घण्टा पहिले
बिएण्डसी कलेज सम्बन्धनमा सरकारको हस्तक्षेपप्रति आपत्ति २३ घण्टा पहिले
फागुन २५ मा पशुपतिमा विशेष पूजा १ घण्टा पहिले
कर्मचारीको लापरबाहीका कारण कोरोना पोजेटिभ व्यक्ति दिल्ली पुगे ४ दिन पहिले
औषधि व्यवस्था विभागमा कार्यरत अधिकृत घुससहित पक्राउ ५ दिन पहिले
नाइजेरियामा बन्दुकधारीले गरे सात जनाको हत्या २ दिन पहिले
सभामुख र सांसदले लगाए कोरोना खोप २ घण्टा पहिले
प्रचण्ड–नेपाल पक्षद्वारा सांसदहरुलाई तत्काल उपत्यका नछाड्न निर्देशन ७ दिन पहिले
साना किसान लघुवित्तले नबिकेको १२ हजार हकप्रद फागुन २८ गतेदेखि बिक्री गर्ने १ दिन पहिले
पर्यटन व्यवसायीको गुनासो सुन्न सरकारलाई टानको आग्रह १ हप्ता पहिले
शिवरात्रिको अवसरमा ताण्डव नृत्य प्रतियोगिता ६ दिन पहिले
वीरगञ्ज हार्ट एण्ड सुपर स्प्यासिलिटी पोलिक्लिनिकको सेवा शुरू ४ हप्ता पहिले
आगामी २३ गतेदेखि शिक्षकलाई कोरोना खोप लगाइने १ हप्ता पहिले
गण्डकीमा १७ जना कोरोना संक्रमित थपिए ५ महिना पहिले
एडुअर्ड फिलिपद्वारा राजिनामा, जाँ कास्टेक्स फ्रान्सको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त ८ महिना पहिले
नेपालकै पहिलो सिनेम्याटोग्राफर मास्केको निधन ४ महिना पहिले
सुनको मूल्य उकालो, तोलामा ८९ हजार ६ सय ! ९ महिना पहिले